पूर्वप्रधानमन्त्री खनालद्वारा इलाम अस्पताललाई पीपीई वितरण – Sulsule
सुलसुले २०७७ असोज ८ गते १६:२२ मा प्रकाशित
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा इलाम क्षेत्र नं. १ का सङ्घीय सांसद झलनाथ खनालले इलाम अस्पताललाई पीपीई वितरण गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित भएर काम गर्ने वातावरण बनोस् भनेर उनले सो सामग्री वितरण गरेका हुन् ।
आफ्नो गृह जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पतालका डा. प्रभु शाहलाई पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले इलाम अस्पतालका प्रमुख सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । उनले इलाम अस्पतालका लागि २५ थान पीपीई र १०० थान गगल्स वितरण गरेका छन् ।
राससका अनुसार जिल्लामा कोरोनाविरुद्धको लडाइँका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्रदान गर्दै आएका उनले यसअघि पनि जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकालाई सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले गत भदौमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहलाई ८०० थान पीपीई र एक हजार ५०० थान सेफ्टी गगल्स प्रदान गरेका थिए ।